Banki-Moon oo Danjire Cusub u soo Magacaabay Soomaliya, – Hiiraanxog.net
HomeWararka SoomaaliaBanki-Moon oo Danjire Cusub u soo Magacaabay Soomaliya,
24/11/2015 Mohamed Abdi Saney Wararka Soomaalia 0
Xoghayaha Guud ee QM Ban Ki-Moon ayaa shalay oo Isniin ahayd u magacaabay ergaygiisa gaarka ah ee Somalia, Michael Keating oo u dhashay dalka UK, isagoo bedeli doona Danjire Nicholas Kay oo hadda haya xilka maamulka xafiiska UNSOM.
Ergayga QM ee Soomaaliya Nicholas Kay ayaa waxay shaqadiisu ku eg-tahay bisha nagu soo fool leh ee December, iyadoo wixii xilligaas ka dambeeya uuu xilka la wareegi doono danjiraha cusub ee QM, Michael Keating.
Sidoo kale, Keating ayaa wuxuu horay u soo noqday la-taliyaha guud ee xoghayaha QM ee Arrimaha Suuriya. Wuxuu kaloo ku xigeenka u ahaa Wakiilka gaarka ah ee Ban Ki-Moon iyo Xiriiriyaha Gargaarka Bani’aadamnimo ee Afgaanistaan intii u dhexeysa 2010-kii illaa 2012-kii.
Dhanka kale, wuxuu horay QM uga soo qabtay xilal kala duwan; isagoo kasoo shaqeeyay dalalka kala ah; Malawi, Gaza/Jerusalem, New York, Afghanistan iyo Pakistan. Dhanka shaqooyinka gaarka ah wuxuu kasoo shaqeeyay shirkado gaar loo leeyahay; isagoo inta badan ka howlgeli jiray arrimo ay ka mid yihiin xuquuqda aadanaha iyo barnaamijyada horumarinta.
Ugu dambeyn, Michael Keating ayaa ka bartay cilmiga Taariikhda Jaamacadda Cambridge ee dalka Britain, wuxuuna ku dhashay sannadkii 1959-kii magaalada Kampala ee Xarunta dalka Uganda, isagoo leh xaas iyo afar carruur ah.